Polyethylene HDPE Bvisa Makara Mapurasitiki Mahwendefa
Chii chakanyanya / chiyero saizi ye hdpe block musoro unoonekera machira?
5mm / 0.2 ″ padiki,
10mm / 0.4 ″ padiki,
20mm / 0.8 ″ padiki,
50mm / 2 ″ padiki,
100mm / 4 ″ padiki
Kureba * Upamhi:
1000 * 1000mm / 40 ″ padiki * 40 ″ padiki,
1000 * 2000mm / 40 ″ padiki * 80 ″ padiki,
1000 * 3000mm / 40 ″ padiki * 120 ″ padiki,
2000 * 2000mm / 80 ″ padiki * 80 ″ padiki,
4x8ft / 1m x 2m Chiedza Duty Turf Grassland Kudzivirirwa Kwenguva Diki Mugwagwa Mats
HDPE Ground Kudzivirira Mat kunogara, kurema uremu uye kwakanyanya kusimba. Macheka epasi peHPPE akagadzirwa kuti ape pekuchengetedza pasi uye nekuwana pamusoro penzvimbo dzakapfava uye ichapa yakasimba rutsigiro hwaro uye traction yezviitiko zvakawanda. Imwe yemhando yepamusoro plywood nesimbi, waytop Plastic pasi dziviriro mameti haimuki, kuora, kutsemura, kupwanya kana kutora makemikari anokuvadza. Ground yekudzivirira bonde rakagadzirwa neHDPE zvinhu.
Heavy Duty Ground Dziviriro Yechinguva Road Mats Mats Ekuvaka
Hongbao - plastiki pepa
1.Zvinhu: UHMWPE, HDPE
2.Color: Nhema, Yero kana yakagadziriswa.
6.Samples Nguva: 5 ~ 7 mazuva
7.OEM Yakagamuchirwa Hongu.
8.Certification inowanikwa: Hongu. SGS; ISO9001: 2008
9.PackingDetails: Pallet ine strech firimu, yakagadzirirwa matanda kesi, katoni, kana vamwe sekukumbira.
10.Production Kugona: 3,00 matani pamwedzi.
11.Payment Nguva: L / C, T / TD / P, D / A, PAYPAL, WESTERN UNION, MARI GRAM.
Wear nemishonga 100% Mhandara UHMWPE Sheets
1, ISO9001: 2008 Hunhu Certification
2, Yakanaka kupfeka kuramba;
3, yakanaka yekuzvidzora lubracation;
4, Low tembiricha nemishonga;
5, isina kunwa mvura, isina tsvimbo;
6, yakanyanya ngura kuramba, nezvimwe.
7, Kurumidza kumisikidza: kukurumidza kuungana / kubvisa mukati uye kunze.
8, yakaderera mutengo: yakaderera mashandiro uye yekugadzirisa mutengo. Project inodhura 1/5 nechando chaicho. Haidi firiji uye chando. Shandisa mune chero nzvimbo uye chero mamiriro ekunze.
9, yakapfava kukwikwidza: zvakasikwa echando skating zvakafanana zviitiko.
Ultra Yakakwira Molekuru Kurema Polyethylene (UHMW-PE) Mapepa
1, Kwakanaka abrasion kuramba
2, Yakanaka tembiricha inokanganisa kuramba, kunyangwe kana iwe uri mu - 180 madigiri embrittlement
3, Yakanaka magetsi zvivakwa, yakaderera mvura yekumwa
4, Yakakwira rova ​​simba, kusimba kwakanaka, yakajairika polyethylene ka200
5, Kurema kwacho kwakareruka, hutano husina chepfu
6, Kuramba kumakemikari ngura, yakanaka yakakwana mehendi simba, inogona kushandiswa zvakanyanya munzvimbo yemigodhi yemigodhi, nezvimwe
"HONGBAO" CNC Yakagadziriswa Borated Polyethylene Zvikamu
Pe Chinyorwa chinotakura polyethylene cnc zvikamu
Pe Chinyorwa chakabikwa polyethylene zvikamu zvinozivikanwa kwazvo kune dzimwe nyika, Kudzivirira neutron mwaranzi kana kudzivirira radiation, inogona kunyatso kudzivirira mwaranzi yekukuvara kumhuri yavo uye nenzanga, radiation radiation, radiation mune yakasarudzika ine akasiyana mabhenefiti e polyethylene ndiro panguva imwe chete.
HDPE SHEET: Tinogona kugadzira HDPE Mahwendefa zvinoenderana zvakasiyana nezvinodiwa zvakasiyana nekushandisa .Sekuda anti-UV, isina moto, anti-static uye nemamwe mavara. Yakanakisa mhando ine yakanaka yepamusoro uye neruvara inoita yedu Injiniya mapurasitiki jira riwedzere uye rinonyanya kufarirwa pasirese.